Fepetra fototry ny Blackjack • แนะนำ - ติชม ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ • Volk Caravelle Thailand รวมทุกอย่างของรถตู้โฟล์ค, Volk Caravelle Webboard,vw thailand, vw watercooler club thailand, vw watercooled, vw watercool, vw thailand club, vwthai, thaivw, vw showtime
หน้าเว็บบอร์ด ‹ หมวดหมู่ทั่วไป ‹ แนะนำ - ติชม ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ ‹ Fepetra fototry ny Blackjack
Fepetra fototry ny Blackjack
โดย Yortvandy8899 » เสาร์ 12 ต.ค. 2019 2:27 pm
Blackjack dia lalao karatra malaza azo lalaovina tahaka ny Blackjack live sy ny Blackjack an-tserasera. Ny lalao indraindray antsoina hoe 21 Blackjack satria ny tanjona amin'ny lalao dia mifototra amin'ny fanatrarana io isa io. Ny fahazoana karatra roa mitotaly 21 amin'ny fifanarahana voalohany dia antsoina hoe Blackjack voajanahary ary tsy azo nokapohina (fa afaka fehezina amin'ny mpivarotra). Raha tsy mahazo ny 21 amin'ny fifanarahana voalohany ny mpilalao na ny mpivarotra dia ny mpilalao amin'ny faran'ny lalao izay akaiky indrindra amin'ny 21 fa tsy mihoatra dia handresy izany.
Na dia tsotra aza ny premise an'ny Blackjack, ny lalao tena dia mety ho sarotra be loatra, misy ny safidin'ny mpilalao sy ny tombontsoa amin'ny lafiny sisiny. Mba hampahafantarana ny filalaovana Blackjack dia misy andian-jaza manokana hamolavola ny tantarany mba hanoritsoritana ny fizotran'ny lalao Blackjack. Ireo mpilalao mpilalao efa za-draharaha efa za-draharaha dia mahalala tsara ireo teny ireo ary ampiasao matetika mandritra ny filalaovana fifaninanana Blackjack. Zava-dehibe ho an'ny mpilalao Blackjack rehetra ny hahafantatra tsara ireo famaritana sy andian-teny ireo mba hilalao ao am-pon'ny lalao.
Ny fananana fahalalana fototra dia manampy ny mpilalao vaovao hahalala ny paikady Blackjack amin'ny fomba roa samihafa. Voalohany indrindra aloha, io fahalalana io dia fanalahidy feno ny lalao ary ny fitsipiny rehetra. Raha tsy mahalala ny teny tsotra, tsy azon'ny mpilalao atao ny manararaotra ny safidin'ny filokana any aminy. Ny fahazoana fahalalana miasa momba ny lingo dia zava-dehibe ihany koa ho an'ireo olona tia mijery maniry ho lasa mpilalao Blackjack matotra. Ny fandraisana anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo mpilalao Blackjack mandroso kokoa momba ny toro-hevitra Blackjack dia hanatsara bebe kokoa miaraka amin'ny fahalalana miasa amin'ny voambolana Blackjack.
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 02 ต.ค. 2019 5:27 pm